Denizli Ski Center Kumhanya kuRekodhi neNhamba yeVashanyi - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast20 DenizliDenizli Ski Center Kumhanya kuRekodhi neNhamba yeVashanyi
13 / 01 / 2020 20 Denizli, Turkish Aegean Coast, GENERAL, TURKEY, TELPHER
denizli ski resort inorekodha huwandu hwevashanyi
Denizli Ski Center, inova imwe yenzvimbo dzinosarudzika yemitambo yechando, inomhanyira kurekodhi nehuwandu hwevashanyi. Vanenge vanhu zviuru makumi mashanu vakashanyira nzvimbo iyi mumwaka mutsva kusvika pari zvino, Meya Osman Zolan nemudzimai wake, Berrin Zolan, vakave vanobatana mukunakirwa kwezvibodzwa zvevagari.
Denizli Ski Center, inova imwe yemapurojekiti akakosha anoitwa neDenizli Metropolitan Municipality, anomhanya kunozivisa nehuwandu hwevashanyi. Munguva ichangopfuura, imwe yenzvimbo vaifarira nzvimbo zvemitambo chando muna Turkey uye 4 vanenge 50 zviuru vashanyi vaipinda nokusarudza imwe Denizli Ski kusvikira mwaka mutsva zvino. Turkey ramba hondo vagari vanoda kusangana vazhinji muguta umo nyanzvi uye mudzidzi skiers uye snowboarders kubva 7 kusvika 70 zvivako vaye vanoda kuita nesinou. Meya weDenizli Metropolitan Municipality Osman Zolan nemukadzi wake Berrin Zolan vashanyirawo kunzvimbo yekutandarira.
Meya Osman Zolan nemukadzi wake Berrin Zolan, vanobatana mukunakidzwa kweiyo mari yevagari, vakakwaziswa nezviratidziro zverudo pano. Zvizvarwa zvemo, zvichiratidza kuti vafadzwa zvikuru neDenizli Ski Center, vakatenda Meya Zolan uyo akauya nezororo muguta. Meya Osman Zolan vachitaurirana nevagari kwenguva, vachisundira macheke evana vachitsvedza munzvimbo yakatsemurwa yaive chiitiko chemifananidzo inoyevedza. Mazhinji emaficha echirangaridzo akatorwa pamwe nevagari panguva yekushanya iyi vaviri veZolan gare gare vakasarudza M3 musangano. Meya Zolan akasangana zvakare nevana vadiki avo vakapa zvidzidzo zvepachena skiing neDenizli Metropolitan Municipality uye akavashuwira kubudirira.
"Mafuta edu ane maricho munguva yechando kushanya mhizha."
Meya Osman Zolan akataura kuti vanofara zvikuru nekufarira kwakanyanya muDenizli Ski Center uye kuti nzvimbo yacho yakauya kwenguva refu munguva pfupi uye kuti ndeimwe yenzvimbo dzinosarudzika pamitambo yechando munguva ichangopfuura. Achisimbisa kuti chimiro chechando chechando muDenizli Ski Center chiri mune huwandu hwenyika, Meya Zolan akati, "Nemakiromita edu akareba gumi neshanu anotaridzika kune vese vanamazvikokota uye nyanzvi dzezvikepe, nzvimbo dzekugadzira dzinogona kutakura vanhu mazana maviri nemazana mashanu paawa, zvivakwa zvedu zvemagariro zvinosangana nezvinodiwa zvezuva nezuva zvevashanyi vedu kwete chete eDenizli. isu tinoshandira vagari vedu kubva kudivi rimwe. Isu tine yakanaka kwazvo nzvimbo ine mweya wayo, runways uye zvese zvivakwa. Iko kufarira mune kwakakura ski nzvimbo yekutenderera yeAegean kuri kuwedzera zuva nezuva. Mabhosi edu ane zvazvinoreva mukushanya kwechando. ”
Eskişehir Konya high-speed train inoenda kunyoresa kutakura vatakure (Video)
Antalya's Public Transportation Information System Inotanga kuNyore
Mota yeOlympic Mota Inomhanya kuRekora
TCDD Inomhanyira nokukurumidza kuCemporary Transportation Service of Tourism
Leasing sector iri kukwira madhora mabhiriyoni e6 nemabhiriji, mugwagwa mukuru uye metro!
Bus operators inoshanda pachitima
China kuendesa nyika-class metro-urefu
Karacadağ Ski Center inogadzira mushanyi rekodhi
400 chikwi vanoshanyira Davraz Ski Resort
Murat Mountain Thermal Ski Center iri kumirira vashanyi
US skier Vonn anojoinha rekodhi
İZBAN kuenda kunhoroondo
Sledding nharaunda yeDenizli ski resort
Denizli Ski Center Anoshanya